Androany amin'ny fampiharana ilaina ho an'ireo fialantsasatra ireo, Journey | Androidsis
Manakaiky ny fomba amin'ny volana aogositra, ny volana nentim-paharazana sy ny hatsaran-tarehy izay anaovan'ny ankamaroan'ny ankamaroany fialan-tsasatra fahavaratra ary ny tanàna lehibe dia lao tanteraka. Tianay ny mampiditra a fizarana vaovao amin'ny Androidsis izay hampahafantarinay anao ny fampiharana tsara indrindra raisina amin'ny Android amin'ity fialantsasatra ity.
Mba hanombohana ity fizarana fahavaratra ity dia te-hanomboka amin'izay heveriko ho iray amin'ireo fampiharana ilaina indrindra aho ary tsy azo hadinoina amin'ny Android mendrika ny sira mandritra ireo fialantsasatra fahavaratra ireo. Ny anaranao Journey ary izany dia logbook tena ilaina izany raha handeha fanangonana sy fitehirizana ny fampahalalana rehetra an-tranonkala tsidihinay amin'ity fahavaratra ity, olona fantatsika, sns, sns.
Raha nahita ny horonan-tsary tao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity ianao, izay atoroko ho toy izany, mba hahitanao amin'ny fomba tena izy ny toetra mampiavaka ny fampiharana sy ny fiasa rehetra atolotray anay, dia ho hitanao ny fomba ny interface, amin'ny endriny madio indrindra Android L o Material Design, lasa mahafinaritra ny maso sy miasa amin'izay misy azy ireo izany. Izany no antony maha-tafiditra azy ao amin'ity fizarana voalohany an'ny fampiharana ilaina ho an'ireo fialantsasatra ireo.
Anisany endri-javatra hanasongadinana azontsika atao ny manasongadina ireto asa manaraka ireto:
Android L fomba famoronana endrika fitaovana.
Karatra ahazoana aina ahafahantsika mahazo vaovao rehetra momba ilay hetsika voatahiry.
Sary iray dia azo ampidirina isaky ny fidirana amin'ny diary.
Manaiky ny tagan'ny GPS.
Ampidiro ao amin'ny naoty na ny fidirana, ny toeran'ny GPS, kaody ZIP ary ny tanàna ary koa ny toetr'andro amin'ny daty sy ora anaovan'ilay naoty.
Afaka alefa izy hahafahany mamantatra ny mozika henonao tamin'ny fotoana nanoratana ary nampiditra an'io fampahalalana io tao anatiny.
Fizarana sary hahazoana miditra haingana amin'ireo fidirana izay misy sary.
Safidy atlas izay hananantsika fidirana amin'ny sarintany, amin'ireo naoty rehetra napetraka tamin'ny toerana nakana azy ireo voalohany.
Safidy hitahiry naoty na karatra amin'ny PDF amin'ny SD Card anay.
Safidy hiarovana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny teny miafina mba hiarovana ny fiainantsika manokana.
Ao amin'ny rindranasa fandoavambola izay manodidina ny 4 Euros dia hanana safidy bebe kokoa toa ny mampihetsika maody alina o mitahiry sy manondrana ny backupary koa esory ny mari-drano izay atolotra antsika ao amin'ireo rakitra voatahiry ao amin'ny PDF miaraka amin'ilay fampiharana maimaim-poana.
Amin'ny ankapobeny a fampiharana ny fomba diary manokana, izay nanaitra ahy be dia be ary mahita zavatra maro azo atao sy fahombiazana lehibe amin'ny fampidinana, vao mainka aza izany, raha toa ka miasa hiasa sy manao fandikan-teny amin'ny fiteny hafa toy ny Espaniôla ny mpamorona azy, ary izany dia mandritra ny fotoana fohy , raha hametraka karazana lakaoly amin'ity fampiharana manaitra ity, Ny fitsangatsanganana dia tsy misy raha tsy amin'ny fiteny Sheakespeare.
Developer: Roa App Studio Pte. Ltd.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tena ilaina amin'ireo fialantsasatra ireo: Androany dia
Android 4.4.4 manomboka tonga amin'ny Moto G